Makhadzi was spotted with Zimbabwean famous singer, see what the two were unto. - Opera News
Makhadzi was spotted with Zimbabwean famous singer, see what the two were unto.
Ndivhudzannyi Ralivhona, known by her stage name Makhadzi, is a South African singer. Born and raised in Ha-Mashamba, Limpopo, she is best known for her songs "Tshanda Vhuya" and "Matorokisi".Born and raised in Sibasa, Limpopo Province in South Africa. She was brought into the world on 30th of June 1996, she is currently 25 years old as of March 2022.
Mukudzeyi Mukombe, who performs under the stage name Jah Prayzah, is a Zimbabwean contemporary musician and lead member of the band Third Generation.He was born and bred in Uzumba Maramba Pfungwe, Zimbabwe. His date of birth is 04th of July 1987, he is currently 34 years old as of March 2022.He is currently married to his lovely wife Rufaro Chiworeso.
The talented singer was in Zimbabwe over the weekend and she was spotted with one Zimbabwean famous singer Jah Prayzah.The two singer were posing together in a room that looks like a studio.Makhadzi recently went to her facebook page and mentioned how Jah gave her a warm welcome.She posted their picture and captioned Jah Prayzah he welcomed me with love ❤️ . We are about to do a magic as always 🔥🔥🔥🔥🔥".
What are your thoughts about Makhadzi's beautiful picture with Jah Prayzah, they look adorable right? Kindly leave your views by commenting below, like this article and remember to share with readers.
Limpopo Province Makhadzi Ndivhudzannyi Ralivhona South Africa Tshanda Vhuya